आखिर किन अन्तर्वार्तामा मै रोइन् ज्योति मगर ? के भने प्रकाश सपुतले जसले गर्दा मन सम्हाल्नै सकिनन् (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / समाचार / आखिर किन अन्तर्वार्तामा मै रोइन् ज्योति मगर ? के भने प्रकाश सपुतले जसले गर्दा मन सम्हाल्नै सकिनन् (भिडियो सहित)
admin January 20, 2022 समाचार Leaveacomment 74 Views
उत्सव रसा’इलीले तयार पारेको कार्य’क्रममा युट्युबशोमा गाएक प्रकाश सपुत र गायिका ज्यो’ति मगर अतिथि थिए सो कार्यक्रमका कुराकानी चल्दै गर्दा प्रकाशले भनेका थिए आज भन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि ज्योति दिदीको नरा’म्रो कुराहरूको बढी चर्चा भै रहँदा मैले कविता लेखेको थिए कार्यक्रम संचालकले सुना’इदिनु भनेपछि सुनाएका थिए सुनेर आफूलाई स’माल्न नसक्ने गरी भावुक भइन् ज्योति।
लोक गायीका तथा कला’कार ज्याती मगरलाई निकै बिन्दास महिलाका रुपमा हेरिन्छ । उनी गायन’मा मात्र नभएर नाचमा पनि उत्तिकै पारंगत छन् । उनले एक नाच प्रति’योगीमा पनि निकै राम्रो प्रतिभा देखाइन् । उनी गीत गाउँदा संगै स्टेजमा नाच्छिन् । त्यसैले पनि उनको माग यस्ता कार्यक्रमहरुमा हुने गर्छन । तर निकै फ’रासिली र बोल्न नहिचकिचाउने ज्यातीले ब्य’क्तिगत जिवनमा भने सोच्ने नसकेका घट’ना भोगेकी छन् ।
उनी महिला माथि इं’कित गरेर बनाइएका कति’पय भनाई प्रति ज्योती सहमत छैनन् । भन्छिन्, एउटा घर राम्रो हुन महिलाको निकै राम्रो भूमि’का हुन्छ भनिन्छ त्यो भनाई प्रति म सहमत छैन । पुरुषको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? उनको प्रश्न छ । उनले आफु दा’गंवाट काठमाडौ आएर आफ्नो ब्यव’सायीक जिवन सुरुवात गर्दाको अनुभवले उनको आँखामा आँशु आयो ।
आफुलाई अलि’कति भाग्य’मानी भएको ठान्ने ज्योती आफु नि ड र भएका कारण हतोस्त’साही नभएको बताइन् । उनले भर्खर काठमाडौ आउँदा देखि नै काम पाएका कारण आर्थिक रुपमा स’मस्या भोग्न नपरे पनि काम’लाई नराम्रो सोचेर आफु माथि राख्ने भनाईले कहिले काँही निकै चित्त दुखेको बताए’की छन् । – इताजा खबरबाट
Previous गाउँको यस्तो नाम जुन लेख्न भन्न नै लाजमर्दो, इन्टरनेटमा यो नाम सर्च गरे आइडी नै हुन्छ ब्लक
Next महंगोमा बाहीर बेच्नका लागि सिटामोल लुकाउने फार्मेसीलाई १० हजार जरिवाना